Cali jeeyte “Hadii Baladweyne Laga wareejiyo Doorshada waxaa iska leh Masuliyadaas Rooble. – XAMAR POST
Cali jeeyte “Hadii Baladweyne Laga wareejiyo Doorshada waxaa iska leh Masuliyadaas Rooble.
By Mohamed Abdi On Jan 29, 2022
Cali Jeeyte Cismaan Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali jeyte oo Goordhaw Shir’jiraaid ku qabtay Aqalka Madaxtooyada Magaalada Baladweyne ayaa Si kulul ugu jawaabay Siyaasin Kasoo horjeestay Ciidamadii la geehay Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Gudoomiye Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Ciidanka la geeyey Beledweyne ay yihiin Ciidan qaran kuwaa oo halkaa loo geeyay la Dagaalanka Al-shabaab, waxa uuna shegay in ay hiiraan u joogaan intaasi oo kaliya, “waxaa jiro Siyaasiyiin Siyaasada ka dhax Raadinaayo cidamadaasi waa dad baagamuuda ah,, ayuu yiri cali jeyte cismaa.
Cali jeyte ayaa shegay in Maxamed Xuseen Rooble uu kasoo jeedaa Galmudug sidoo kalana Maalin kasto Dowladdu ay ka dajisaa Cismaano. Golaha Wasiirdda ma fariisin Laakiin Baladweyne waxuu Wasiirdda u shiriyay oo Ciidanka ah Laga Celiyo u dhahayo maqano,
“Hadii Baladweyne Laga wareejiyo Doorshada waxaa iska leh Masuliyadaas Rooble reer hiiraanow Ogaad Ayuu Warkiisa raaciyay Guddoomiyaha Gobolka hiiraan Cali jeyte Cismaan.
Hadalka Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cismaan ayaa kusoo beegmayo xili maanta shir jaraa’id uu muqdisho ku qabtay Jeneraal Xuud kaas oo uu ku shegay In ay heshiis gaareen Madaxweyne Farmaajo Ciidamada kageeyay Beledweyne yihiin Ciidamo Dowladdeed.
Faah-faahino kasoo baxayo Qarax ka dhacay Muqdisho.